ဆိုင်ကယ် တစ်ပတ်ရစ်ကား ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
White ရောင် Honda Scoopy Prestige အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Black ရောင် Honda Scoopy အမျိုးအစား 2012 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
Blue ရောင် Honda Scoopy Jean Lover အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Red ရောင် Honda Scoopy Monkey အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည...
Pink ရောင် Honda Scoopy Jean Lover အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
White ရောင် Honda Scoopy Active Boy အမျိုးအစား 2012 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ...
Black ရောင် Honda Scoopy အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
Blue ရောင် Honda Scoopy Active Boy အမျိုးအစား 2012 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Red ရောင် Honda Scoopy Prestige အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . ...
White ရောင် Honda Scoopy အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ရှမ်းပြည် ရှေ့၊ တောင် မြောက် အသီးသီးက မြို ကြီးများ၊ ကော့သောင်း၊ ရေး၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ရခိုင်၊ တနင်္တာရီ၊ မြန်ပြည် အလယ်ပိုင်း ဘယ်နေရာမှာ မဟုတ် ဆိုင်ကယ် ကို အများအပြား မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကား အရေအတွက် နဲ့ ဆိုင်ကယ် အရေအတွက် တည်ရှိနေမှုက သိပ်ကွာဟ မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့ က မြို့တွင်းလို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဆယ်မြို့ကျော် လောက်မှာပဲ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် ပိတ်ပင်ပြီး ကျန်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဟုတ် မောင်းနှင်လို့ ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း သိန်း ဆယ်ဂဏန်းသာ ရှိတာ ကြောင့် လူအများစု ဝယ်နိုင်တဲ့ အနေအထား တစ်ခုမှာ ရှိပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်ကို မြို့တွင်း ခရီးသွားလာရေး အတွက်တင် မကပဲ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အတွက် အသုံးပြု နေတာကို အချို့ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာ မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ အင်းစိန်၊ ဒဂုံ မြို့သစ်၊ သန်လျင် တို့ဘက်မှာ ဆိုင်ကယ် ဖယ်ရီ အဖြစ် ပြေးဆွဲ လုပ်ကိုင်တာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်၊ ကော့သောင်း နဲ့ နယ်စပ်တို့ ဘက်တွေမှာဆို ရင်တာ့ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်များနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူခြင်း၊ ခရီး သွားလာရေး အတွက် အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ် ကြ ပါတယ်။ ယင်း ဆိုင်ကယ်မှာမှ ပြည်ပထုတ် အများစု တင်သွင်းပေမယ့် ပြည်တွင်းထုတ်လည်း ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အတော်လေး နည်းပါတယ်။ ဝယ်ယူမှု ဈေးကွက် အနေ နဲ့ ကလည်း တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နဲ့ အဟောင်းတွေ ဝယ်ယူတာ များ ပါတယ်။ အသစ် ဝယ်ယူမှုထက် အဟောင်းက များပေမယ့် အသစ်ဈေးကွက်လည်း မသေး ပါဘူး။ လောလော ဆယ်ကတော့ အဟောင်း ဈေးကွက် အကြောင်းကို ပြောလို ပါတယ်။
အဟောင်း ဝယ်ဖို့ နေရာ
အဟောင်း ဝယ်ဖို့အတွက် မြို့ကြီး အသီးသီးမှာ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားတန်း ရှိပါတယ်။ အသစ်လည်း ရရှိနိုင်သလို၊ အဟောင်းလည်း ရရှိ နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်း အဟောင်း ဝယ်လို့ရတဲ့ ဈေးကွက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနယ်စပ် တို့မှာလည်း အဟောင်း တင်သွင်းမှု ရှိပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့် နယ်စပ်မှာ ဆိုရင် ၃ သိန်းဝန်းကျင် မှာပဲ ရှိပါတယ်။ တောင်ကြီး တို့လို မြို့မှာလည်း ဈေးနှုန်း သုံးသိန်း၊ လေးသိန်း နဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဆိုင်ကယ် တစ်စီး ရနိုင် ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းမှာလည်း အဟောင်း များကို သီးသန့် ရောင်း ချတဲ့ ဆိုင်များ ရှိပါသေးတယ်။
တရုတ်ဖြစ် နဲ့ ဂျပန်ဖြစ် အများဆုံး ဈေးကွက်
မြန်မာပြည်မှာ အများဆုံး ရှိနေတာက တရုတ်ဘီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Kenbo ဘီးများဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ထိုင်းဘီးက ဒုတိယ လိုက်ပါတယ်။ အများစု တတ်နိုင်ပြီး ဝယ်နိုင်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကလည်း တရုတ်ပြည်ထုတ် ဆိုင်ကယ်များ ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ motors.com.mm ကနေ မြန်မာပြည် အတွင်းက ရနိုင်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစား များစွာ ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။